About Us -. HD Medical Technology Co, Ltd
Dana Us: + 86-311-66575023
HD Medical chake chaibva pane 2000, ari mutsva yepamusorosoro zvebhizimisi uyo kushandisa pakutsvakurudza & kuvandudza, kugadzira, rokutengesa uye pashure-okutengesa basa kwezvokurapa kuri michina zvigadzirwa. HD Medical yapfuura advertising kuti dzakawanda ISO 9001 uye ISO 13485 yepamusoro utariri hurongwa, ane mhando 20 rezvedzidzo pfuma rworudyi bvumidzwa certificate.
zvigadzirwa dzedu dziri akakamurwa Medical DR akatevedzana uye Animal DR akatevedzana. Zvokurapa DR dzinotevedzana anosanganisa Fixed Style DR series, Mobile DR series, Radiography sandara mubhedha DR series, Portable DR series, Dynamic sandara mubhedha DR series, Physical kuongororwa bhazi uye zvichingodaro. Animal DR akatevedzana zvinosanganisira High mugumo Pet DR, Simple uye nyore Pet DR, DR update basa, Pet X-ray zvokushandisa, Veterinary ruvara Ultrasound, Veterinary MRI, Veterinary kuvhiya mubhedha dzakatevedzana uye kudzivirirwa chirongwa etc. Nesuwo kubudisa vose mhando DR Vanamakanika chikamu kuna DR.
HD Medical koka pachokwadi sangano Distributors mhiri nyika.
HD Medical chake chaibva pane 2000, ari mutsva yepamusorosoro zvebhizimisi uyo kushandisa pakutsvakurudza & kuvandudza, kugadzira, rokutengesa uye pashure-okutengesa basa kwezvokurapa kuri michina zvigadzirwa.
Inquiry For Price mazita
Shijiazhuang HD Medical Technology co., Ltd.